Ma Farmaajo iyo Kheyre ayaa bilaabay olole xilli hore ka billowda Soomaaliya mise mucaaradka? – Madal Furan
Hoy > Warka > Ma Farmaajo iyo Kheyre ayaa bilaabay olole xilli hore ka billowda Soomaaliya mise mucaaradka?
Ma Farmaajo iyo Kheyre ayaa bilaabay olole xilli hore ka billowda Soomaaliya mise mucaaradka?
Editor October 2, 2018 Warka 0
Madal Furan – Waxaa muddo sannad iyo bar ah laga joogaa markii la doortay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, xiligaasi oo ay Soomaaliya ka baxday ololihii doorashada ee muddada socday.
Al-shabaab oo Sarkaal ka tirsanaa waaxda sirdoonkooda Muqdisho guddoomiye ugu soo magacaabay
Bangi ay bulshadu lacag dhigato dalka Kenya oo laga dhacay 20 Milyan Kenya shilin
Madaxweyne Biixi oo xaalad degdeg ah ku soo rogay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag.